အဆိုပါဧရာမနွေဦး 2018 အတွက် Roudnice | ဧရာမ, ဧရာတောင်တန်း, ခကျြပရဒိသု
Homeတောင်များဗီဒီယိုအဆိုပါဧရာမနွေဦး 2018 အတွက် Roudnice
အဆိုပါဧရာမနွေဦး 2018 အတွက် Roudnice
Roudnice ၏က Short ဖေဖော်ဝါရီလအအေး ဧရာမတောင်တန်း။ Roudnice တစ်ဦးရွာ, မြှို့နယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်Jestřabí ဧရာမတောင်တန်း ခရိုင် Semily ။ ဒါဟာအရှေ့တောင် Jestrabi v ၏2ကီလိုမီတာအကြောင်းကိုတည်ရှိသည် ဧရာမတောင်တန်း။ မှတ်ပုံတင်လိပ်စာများရှိပါတယ် 80 ။ အမြဲတမ်းအတွက် 47 မြို့သားတို့ကဒီမှာနေထိုင်ကြသည်။ Roudnice အုပ်ချုပ်မှုဧရိယာ၌တည်ရှိသည် Roudnice ဧရာမတောင်တန်း ဧရိယာ 2,19 km2 ။
Roudnice သည့်ခေါင်နှင့်ချိုင့်ဝှမ်း Jizerky Roudnice စီးအကြားတည်ရှိသည်။ အဆိုပါမြို့တော်စည်ပင်က 256 ဟက်တာဖြစ်ပါတယ်။ 45 မြို့သားတို့ကဒီမှာနေထိုင်ကြသည်။ Roudnice ရွာသားအပေါငျးသုံးပိုင်း၏အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံအခွင့်အာဏာများက flanked ။ ဒါဟာ (က "သတ္တုဗေဒ Way ကို" ဟုခေါ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော) ရှိရာ glassworks Rokytnice အတူ Jilemnice ဆက်သွယ်အလွန်အရေးကြီးသောလမ်းရှေ့တော်၌ထိုမြို့မှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။
ရွာ၏လက်ရှိပုံစံ 1960 ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း Hawk နှင့် Roudnice အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွင် 1970 Křížliceပူးတွဲခဲ့ကြသည်။ သုံးကျေးရွာပေါင်းဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းတောင်တော်ရွာ၌ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့Jestřabí ဧရာမတောင်တန်း။ ကျနော်တို့အနောက်မြောက်ဘက် Jilemnice ၏ 10 ကီလိုမီတာ (။ မြေပုံကြည့်ပါ) အကြောင်းကိုအနောက်တောင်ပိုင်းဧရာတောင်တန်းထဲမှာရှာပါ။ အဆိုပါရွာအကြောင်းကိုသုံးပုံတစ်ပုံအငြိမ်းစားအသက်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြအကြင်၏ 246 မြို့သားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့များကိုများနှင့်ပိုမိုကြီးမား Mainframe အတွက်ကျေးရွာများသို့လူငယ်များ၏ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကျနော်တို့ရွာကိုရှောင်ရှားမရခဲ့ပေ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်သို့သော်ငယ်ရွယ်မိသားစုများနှင့်သားသမီးများ၏ဆက်စပ်အရေအတွက်အရေအတွက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားစေပါသည်။
ရွာ၏တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းဧရာတောင်တန်းအမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဇုန်အတွက်ကြွင်းသောအရာတွင်တည်ရှိသည်။ ဒီနေရာတွင်အလွန်အသက်ကြီးသစ်ပင်များဖြင့်ကာကွယ်ထား, protected မန်များနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒီဧရိယာများအတွက်ပုံမှန်ပင်ရိုးရာဗိသုကာရှိပါတယ်။
ယင်း၏တည်နေရာ, လတ်ဆတ်သောလေနှင့်တစ်ဦးကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအိမ်နှင့်ပြည်ပကနေခရီးသွားတွေနှင့်အတူ ပို. ပို. ရေပန်းစားသည်။ သူတို့မြို့ကြီးများတွင်အဓိကအားရမငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးရှိပါတယ်။ အချို့အိမ်ပြန်ရဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သူတို့အိမ်တွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိပါသည်။
သေးငယ်တဲ့တောင်တပြင်ရွာ၌အသက်တာကိုလွယ်ကူပါတယ်ဖူးပါ။ အဲဒီမှာအလုပ်အကိုင်မရှိခြင်းသည်နှင့်ဒါပတျဝနျးကငျြမြို့ရွာနှင့်ပိုကြီးတဲ့မြူနီစီပယ်အတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိရပါမည်။ ဒေသခံများအများအားဖြင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေး, ဆောက်လုပ်ရေး, သစ်တောနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အိမ်နီးချင်းကျေးရွာများသို့ကျောင်းကိုအသွားအပြန်မှကလေးများ။ အခြေအနေကပင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သို့သျောလညျးကလူကဒီမှာဆက်ရှိနေနှင့်အားလုံးနီးပါးနေအိမ်ရှိပါတယ်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။
ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ, တစ်ဦးချင်းစီမြူနီစီပယ်၏သမိုင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရွာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများမှကျိန် ဆို. ပူဇော်အောက်ပါစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ရှာဖွေနိုင်သည် (။ Jestřabí, Roudnice, Křížliceကြည့်ပါ) ။
Tags: 2018, Mavic djs, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, ဂီတ, နွေဦး, KrkonošíchးJestřabí, Mavic, အဘို့အ Mavic, တေးသံ, ဂီတ, Roudnice, အဆိုပါဧရာမတောင်တန်းအတွက် Roudnice, မိုးပွင့်, သီချင်း, ဆောငျးတှငျး
Previous post ရဲတိုက်Frýdštejn
next ကိုဆောင်းပါး ရဲတိုက် Wallenstein